Yenikapı - RayHaber | raillynews
Qiimaha Tigidhada Marmaray iyo Safarka Marmaray: Dhismaha mashruuca Marmaray, oo isku xiri doona labada jid ee isku xirta Bosphorus, si xawli ah ayuu usocdaa. Khadadka tareenka ayaa ka gudbaya Bosphorus [More ...]
Xuduudaha Istanbul waxaa la ilaaliyaa Kamarada
Dowladda Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay daawanaysaa dhammaan xuduudaha magaalada Istanbul oo ay kaamirooyin ka socdaan Karaburun ilaa Kilyos. Wasakhda la helay ayaa isla markiiba laga saarayaa. Baadhitaanka iyo nadiifinta 7 / 24 ayaa sidoo kale lagu sameeyaa dusha sare ee badda, taas oo ka baxsan xeebta. Sannadkii 2019 [More ...]
Waqtiga Safarka ee Marmaray: Dhismaha mashruuca Marmaray, kaas oo isku xiri doona labada jid ee isku xirta Bosphorus, si xawli ah ayuu usocdaa. Khadadka tareenka ayaa ka gudbaya Bosphorus waxayna ku xirmayaan tunnel-ka tareenka. [More ...]
Dolphins waxay la socdeen Kooxaha Biyaha Soodhawaynta
Subaxaan, dolphins waxay wehelinayeen koox nadaafadeed oo ku taal badda hoose ee magaalada Istanbul. Dullaaliyeyaasha la socda kooxaha Yenikapı ilaa Bosphorus ee ka baxsan Sarayburnu waxay abuureen sawirro midab leh. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
IBB 87 Xeebta 5 Million 700 Thousand TL
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, nadaafadda badaha iyo ilaalinta meelaha nolosha ee nolosha badaha kama dhigeyso indhaha kuwa sababa wasakhda. IMM; Sannadihii ugu dambeeyay ee 1 waxyeello leh sida qashinka adag, wasakhda batroolka, wasakhda wasakhda leh [More ...]
Laga soo bilaabo Marmaray Gaadiidka Marmara Waters
Yenikapı 12, oo ka mid ah maraakiib alwaax laga helay ceelasha Marmaray, ayaa dib loo soo saaray oo lagu bilaabay biyaha. 1.200 sano ka hor si ay u matalaan Sea xumeeyayna ee ganacsatada Turkey 12 Yenikapi dibadda. Marmaray inta lagu jiray qodista [More ...]
Jawaab ka imanaysa ururrada deegaanka si loo helo warshad korontada kulul ee loo yaqaan "Newkapı" ee Marmaray
Jawaab celin ka timid ururada deegaanka ilaa warshadda biyaha kulul ee saboolka ah ee la keenay Yenikapı oo loogu talagalay Marmaray: Wakiilo ka socda ururada deegaanka oo ka hadlaya "warshad kuleylka dabeysha" Doğan Bey, oo lagu wareejiyay xeebaha Yenikapı si ay koronto u siiso Marmaray. [More ...]
Ra'iisul-wasaare Saacid CHP ayaa waydiisay warshad korontada kulul
Raiiselwasaaraha CHP wuxuu weydiiyay warshad tamarta sabaynaysa sonkorta: CHP Istanbul kuxigeenka Dr .. Ali Şeker wuxuu dhowaan qabtay markab magaciisa la yiraahdo "Doğan Bey ine" oo loogaga hadlay ajendaha baarlamaanka. Sonkorta CHP, [More ...]
12 waxay ku raaxeeysataa badda kadib sanado ka dib
12 sano ka dib ku raaxaysan badda; Marmaray iyo dhulka hoostiisa la xiray sababo la xiriira dhismaha la hor Üsküdar Square, 12 sano ka dib markii ugu horeysay ee dhismaha mashruuca Marmaray ah, mid ka mid ah soo aragteen ee ugu muhiimsan Turkiga ee gaadiidka badda [More ...]
Dhirta cusub waxay burburinayaan
Biyihii meheradaha lagu qariyey ee Yenikapı ayaa la daadiyay. Dekadda Theodosius ayaa dib loo furay 2006 inta lagu gudajiro howlaha ka socda Yenikapı ee ku saabsan baaxadda Mashruuca Eurasia ee Istanbul [More ...]
480 Raadinta Duulimaad Duulimaad Duulimaad ah oo Marmaray Dimoqraadiyada iyo Shuhado
Marmaray 480 wuxuu xambaarsaday kun rakaab ah Dimuqraadiyadda iyo Shuhadada Rally: 07 ee Yenikapı August 2016 Bishii Agoosto, muwaadiniintu waxay u duuleen Marmaray si ay u aadaan "Dimuqraadiyadda iyo Martirs Rally". 07 Agoosto ee Yenikapı [More ...]
Marka ugu horeysa ee dunida, taariikhda 2 ee kunka sano ah waxaa laga sii daayaa Newkapı
Midda ugu horreysa adduunka, taariikhda qarniga '2' ee taariikhda qarniyaalku waxay ka soo baxday qoditaankii Yenikapı: Intii lagu jiray qodiddii qadiimiga intii lagu jiray qoditaankii Marmaray, Yenikapı, oo leh qaab dhismeedka dhismaha iyo qaab dhismeedka waddo ay leeyihiin miinooyinka Ottoman-ka, [More ...]
Farsamada Tababarka ee Istanbul Metro
Guul-darrooyinka Farsamada ee Subway Istanbul: Istanbul Metro 06 oo ka socota Yenikapi saaka, 00'da saboolka, "sababa la xiriira cilad farsamo awgeed, duullimaadkeenna waxaa la sameyn doonaa inta u dhexeysa Yenikapi-Sishane". Markay xaaladdu sidaa tahay, inaad ka degto metrooga xarunta Şişhane [More ...]
Dhismaha ugu weyn ee maraakiibta qadiimiga ah ayaa la furi doonaa
Markabkii ugu weynaa ee aruurinta maraakiibta adduunka laga furi doono: Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay qaadaysaa talaabooyinkeedii ugu horreeyay oo ay ku soo bandhigayaan ku dhawaad ​​kun shaqo oo ka socota Dekadda Theodosius, oo ay qodeen ceelasha Marmaray. Byzantine hore wuxuu qariyey qashin-qubka Marmaray [More ...]